Wararka - Kahortaga Coronavirus
Nidaamka Chlorination-ka khadka tooska ah ee korantada ee MGPS Electrolysis
6-8g / L Nidaamka Koloriinta ee Brin Electrolysis
Mashiinka Macmacaanka Biyaha RO
Mashiinka Sare ee Biyo saafi ah Filter Sifeeyaha Biyaha Nadiifinta
Ka hor-tagida fayruuska Corona
Sida laga soo xigtay xogtii ugu dambeysay ee waqtiga dhabta ah ee ka socota Ururka Caafimaadka Adduunka bishii Nofeembar 5, 2020, 47millions kiisaska oof-wareenka cusub ee cudurka ayaa laga helay adduunka oo dhan, iyadoo ay u dhinteen 1.2millions. Laga soo bilaabo Maajo 7-keedii, dhammaan magaalooyinka Shiinaha waxaa loo waafajiyay halista yar iyo "eber" meelaha khatarta sare iyo dhexe leh, taas oo macnaheedu yahay in Shiinuhu uu gaadhay guul la taaban karo oo ku aaddan ka hortagga cudurrada faafa ee cudurka cusub ee coronavirus. Qaabka cudurka ka hortaga faafida wali waa mid aad u daran. Agaasimaha guud ee WHO Dr. Tan Desai ayaa shirkii jaraa'id ka sheegay in masiibadan ay iftiimineyso in nidaamyada caafimaadka qaranka iyo kuwa maxalliga ah ay xoogan yihiin isla markaana ay door muhiim ah ka ciyaaraan aasaaska amniga caafimaadka adduunka iyo saameynta caafimaad ee guud.
Ka dib markii uu soo ifbaxay cudurka 'COVID-19' ee ka dilaacay Shiinaha, dowladda Shiinaha ayaa si deg deg ah uga jawaabtay oo qaadatay istiraatiijiyaddii ka hortagga cudurrada ee saxda ah si looga hortago faafitaanka fayraska. Tallaabooyinka sida "xiritaanka magaalada", maareynta bulshada oo xiran, go'doominta, iyo xaddididda howlaha banaanka ayaa si wax ku ool ah u gaabiyay faafitaanka cudurka 'coronavirus'.
Waqtiga ku habboon sii daa waddooyinka infekshinka la xiriira, u sheeg dadweynaha sida loo is-ilaaliyo, loo xannibo meelaha daran, iyo in la karantiilo bukaanka iyo dadka lala xiriiro. Xooga saar lana hirgaliyo sharciyo iyo qawaaniin taxane ah oo lagu xakameynayo falalka sharci darrada ah inta lagu guda jiro ka hortagga cudurrada, lana hubiyo hirgelinta tallaabooyinka ka hortagga cudurrada iyadoo la abaabulayo xoogagga bulshada. Meelaha muhiimka ah ee faafa, abaabulo taageero caafimaad si loo dhiso isbitaalo takhasus leh, iyo in loo sameeyo isbitaalo banaanka bukaanada jilicsan. Qodobka ugu muhiimsan ayaa ah in dadka Shiinuhu ay gaareen heshiis la isku raacsan yahay oo ku saabsan faafa isla markaana ay si firfircoon ula shaqeeyaan siyaasadaha kala duwan ee qaranka.
Isla mar ahaantaana, soosaarayaasha si deg deg ah ayaa loo abaabulay si ay u sameeyaan silsilad warshadeed oo dhammaystiran oo loogu talagalay sahayda ka hortagga cudurrada. Dharka difaaca, maaskarada, jeermiska iyo sahayda kale ee ilaalinta kaliya ma daboolaan baahiyaha dadkooda, laakiin sidoo kale waxay ugu deeqaan qaddar badan oo ka hortagga cudurrada faafa waddammada adduunka. Si adag u shaqee si looga wada gudbo dhibaatooyinka.
Maaskarada, dharka difaaca, iyo jeermis dileyaasha ayaa looga baahan yahay dadka adduunka oo idil inay yihiin qalab wax ku ool ah oo loo yaqaan 'CONVID-19'. Suuqa waji-furka, dharka difaaca, jeermis-dileyaasha, iwm waa ku adag yihiin waddamada badankood.
Maaddaama uu yahay wakiilka jeermiska waxtar u leh, nidaamka soosaarida sodium hypochlorite waxaa u baahan macaamiil badan oo adduunka ah.
No. 10 Hongqi wadada galbeed, Degmada Zhifu, Magaalada Yantai, Shiinaha
Sifeeyaha Roorka Biyaha Nadiifinta, Ro Water Filter Qaybaha Dayactirka, Nidaamka Sifeeyaha Xirfadlaha, Biyaha Badaha Si Loo Cabbo Mashiinka Biyaha, Naqshadeynta Nidaamka Nidaamka 'Sodium Hypochlorite', Geedi socodka macaaneynta,